Maitiro ekubvisa mapundu kubva kumashure | Bezzia
Susana Garcia | | Runako, Runako manomano
El acne idambudziko iyo yatinogona kuva nayo mumatanho mazhinji ehupenyu hwedu, uye izvo zvinoonekwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Inogona kuve nechikonzero chehormone, asi inogona zvakare kuoneka nekuda kwekushushikana, kuwanda kwebhakitiriya uye kunyangwe kusvibiswa. Iva sezvazvingaite, pane nzira dzekuvandudza dambudziko iri uye kubvisa zvishoma nezvishoma mapundu kumusana.
Mukutarisana nemamiriro ekunze akanaka, tinoda ratidza musana wakanaka, uye pane izvi isu tinofanirwa kuve nerakaisvonaka uye rakatsetseka ganda. Saka isu tinofanirwa kudzika pasi kuti tishande nenzvimbo ino, kuita kuti mapundu atsakatika zvachose zhizha. Uye kune zvinhu zvakawanda zvatinogona kuita, kusanganisira kushandisa zvakasikwa zvigadzirwa zvatinazvo kumba.
1 Tsvaga zvikonzero
2 Kuchengetwa kwezuva nezuva
3 Bvisa nzvimbo yacho
4 Natural fomula yekubvisa mapundu
Imwe yenzira dzekubvisa mapundu inowanzo rara mukati tarisa zvikonzero uye urwise. Isu tinotaura semuenzaniso kana dambudziko riri rehormone, nekuti iwe unogona kuita imwe bvunzo kuti uone kana mahormone ako akaenzana. Zvakare kana iri dambudziko rekudya kwakashata, nekuti zvinokanganisa kana zvasvika pakuva nezvakawanda kana zvishoma marara. Mune ino kesi isu tinofanirwa kusimudzira chikafu, tichidzivirira mafuta akazara uye zvakare neshuga yakawandisa. Kudya kune hutano uye kwakareruka kuchatibatsira, pamusoro pekunwa zvakanyanya kuitira kuti ganda rigare riine hutano uye risina tsvina.
Kuchengetwa kwezuva nezuva
Kana isu tichiona kuti pane chimiro che tsvina inoonekwa Munzvimbo yekumashure, tinofanirwa kungwarira maitiro edu ezuva nezuva, nekuti zvinogona kutikuvadza. Hatifanire kukwenya kana kubvisa mapundu kana tsvina iyi nemaoko asina kugezwa, nekuti mabhakitiriya anoungana pazvipikiri anogona kuwedzera dambudziko. Iwe unofanirwa kuchenesa nzvimbo uchidzivirira masiponji, umo mabhakitiriya anowedzerawo. Pamusoro pezvo, kana tikashandisa donje rakanyoroveswa nemoni tinobatsira zviyo izvi kuti zviome, sezvo iri nyeredzi. Kana mamiriro ekunze akanaka asvika, zvirinani kusiya musana wako usina kuvhurwa, uchishandisa kudzivirira kwezuva, sezvo izvi zvinomesa zviyo uye nekuvandudza chitarisiko chavo, kunyanya kana tichigeza mumvura yegungwa.
Bvisa nzvimbo yacho
Imwe nzira yekubvisa zvishoma nezvishoma iwo marara akazara kumashure ari kubvisa masero akafa. Kanokwana kaviri pasvondo tinofanirwa kuburitsa nzvimbo, kunyangwe tichifanira kuzviita zvinyoro-nyoro kuti tidzivise kutsamwa. Kumushure tinogona kushandisa panguva imwechete chinhu chinobatsira kuomesa zviyo izvozvo. Semuenzaniso, zano rakanaka nderekugadzira chikafu chinogadzirwa pamba neshuga, kwatinowedzerawo muto wemonimu, uyo unodzvinyirira. Chimwe chinhu chinowanzo shandiswa sechinyoro exfoliant ioatmeal, inovawo chigadzirwa chinonyorovesa, chakanakira avo vane ganda rakaoma kana rakaoma. Mushure mekubvisa mafuta, isa mafuta ekuzora kuitira kuti ganda riite zvakanaka. Iyo moisturizer iri nani kana isina mairi mukuumbwa kwayo, nekuti izvi zvinokurudzira kuoneka kwemafuta nemapundu paganda.
Natural fomula yekubvisa mapundu
Pane zvakawanda zvinhu zvatinogona kushandisa kugadzirisa kunzwika kweshure. Iyo oatmeal iri exfoliating uye moisturizer, uye shuga inotibatsirawo kubvisa masero akafa nemaabhakitiriya. Kana iri aloe vera, icho chinhu chakakosha cheganda rine kutsvuka uye matambudziko ehutachiona, sezvo ichizorodza ganda. Kana iwe uine matambudziko nemapundu ane hutachiona, hapana chinhu chiri nani kupfuura huchi, sezvo iine antibacterial properties. Kuti uome zviyo, zviwanire muto wemonimu kana mafuta emuti wetii, yakanaka kupedzisa zviyo. Nezvinhu izvi tinogona kugadzira mamask kuti zvishoma nezvishoma tibvise mapundu kumusana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Maitiro ekubvisa mapundu kubva kumashure
Mishonga yekumba yakanakisa yekurwisa mamota
Shangu chena dzadzoka: isu takasarudza aya mashanu mhando